मीनभवन पुल अघिको नदी किनारमा सफाइ, चार मेट्रिक टन फोहर व्यवस्थापन ! - नेपालबहस
मीनभवन पुल अघिको नदी किनारमा सफाइ, चार मेट्रिक टन फोहर व्यवस्थापन !
Volunteers participating in the Bagmati clean-up campaign, in Kathmandu, on Saturday, May 7, 2016. Photo: THT
काठमाडौं । प्रत्येक हप्ताको शनिबार झैँ आज पनि उपत्यकाका वाग्मतीलगायत सहायक नदी र चक्रपथ सफाइ अभियानले निरन्तरता पाएको छ । विसं २०७० जेठ ५ गतेदेखि शुरु भएको सफाइ अभियान जस्तोसुकै प्रतिकुल अवस्थामा सञ्चालन गरिँदा जनचेतना जगाउन फलदायी भएको छ ।
जनस्तरबाट शुरु भएको अभियानमा विशेषगरी स्थानीय सरकारले सहयोग नगर्दा सोचे अनुरुपको काम भने हुन नसकेको सफाइ अभियानकर्मीले बताएका छन् । वाग्मती सफाइ माहाअभियानको ३१७औँ हप्तामा मीनभवन पुल अघिको नदी किनारमा सफाइ गरी चार मेट्रिक टन फोहर व्यवस्थापन गरिएको छ ।
सफाइमा काठमाडौँ महानगरपालिका लगायत २४ संस्थाका ५०० भन्दा बढी अभियानकर्मीको सहभागिता रहेको अभियानकर्मी माला खरेलले बताए । अधिकार सम्पन्न वाग्मती समितिका आयोजना प्रमुख आशिष घिमिरे, काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं। ३१ का अध्यक्ष नारायण भण्डारीको पनि सफाइमा सक्रियता थियो ।
सफाइ अभियानमा सहयोग गर्नुभएका महानगरीय प्रहरी वृत्त बानेश्वरका प्रमुख गोविन्द काफ्ले सरुवा भएका आज बिदाइ समेत गरिएको थियो । रुद्रमती सफाइको २७१ हप्तामा वातावरण दिवसको अवसर पारेर रातोपुलबाट नदी किनारका विभिन्न भाग परिक्रमा गरी जनचेतनामूलक ¥याली निकालिएको थियो । ¥यालीको शुभारम्भ सांसद गगनकुमार थापाले गरे । ¥यालीको समापन प्रदेशसभा सदस्य नरोत्तम वैद्यले बताए ।
विष्णुमती सफाइ अभियानको २४४ हप्तामा टेकु कालिमाटी क्षेत्रस्थित नदी किनारका स्थानीयवासीलाई सफा गर्न बाहिर निकालिएको संयोजक शोभाकान्त पाण्डेले बताए । शोभाभगवती मुनिको विष्णुमती धेरै फोहर भए पनि स्थानीयवासी सफाइ सक्रिय नभएकाले बाहिर निकाल्ने कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । सो क्रममा मरेर नदीमा फालिएका पाँच कुकुरलाई सफाइका क्रममा खाडल खनेर पुरिएको थियो ।
वाग्मती तिलगङ्गा खण्ड सफाइको २१८औँ हप्तामा त्यस क्षेत्रमा सफाइ गरी एक मेट्रिक टन फोहर व्यवस्थापन गरिएको संयोजक आशा पाण्डेले बताए । वाग्मती सुन्दरीघाट खण्ड सफाइको १२७औँ हप्तामा चोभार गणेशस्थान क्षेत्रमा सफाइ गरी दुई टन फोहर व्यवस्थापन गरिएको संयोजक चित्र सुनुवारले जानकारी दिए ।
चक्रपथ सफाइ अभियानको ११४औँ हप्तामा माछापोखरी चोक गङ्गा हल हुँदै माछापोखरी चोकसम्म सफाइ गरी आठ मेट्रिक टन फोहर व्यवस्थापन गरिएको छ । चक्रपथ वाफल खण्ड सफाइको ९५औँ हप्तामा कलङ्कीबाट सोल्टी दोबाटोसम्म सफाइ गरी एक ट्रक फोहर व्यवस्थापन गरिएको छ । उपत्यकाका गुह्येश्वरी माथिको वाग्मती क्षेत्र, आलोकनगर, मनोहरा लगायत स्थानमा पनि आज सफाइ गरिएको जनाइएको छ ।
चक्रपथ सफाइ अभियान
मेट्रिक टन फोहर
Previous articleलुम्बिनी सुन्दरीकरणको काम हुँदै
Next articleमौद्रिक नीतिमा हुने परिवर्तनले शेयर बजारलाई समेत प्रभावित : अर्थमन्त्री खतिवडा
आफ्नै सदस्य अन्सारीको अभिव्यक्तिप्रति आयोगद्वारा खेद प्रकट
प्रकोपका पिडितलाई यथाशिघ्र उद्धार र राहत दिन राप्रपा अध्यक्ष राणाको माग